၁ သိန်းကျော်ဖုန်းတွေထဲမှာ Honor 7S နဲ့ Xiaomi Redmi6ဘာကို ရွေးမလဲ?
12 Oct 2018 . 3:03 PM
ဖုန်းတစ်ခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ငွေကျပ် ၁ သိန်းကျော်ဝန်းကျင်က အနိမ့်ဆုံးသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ၁ သိန်းကျော်တန် စမတ်ဖုန်းတွေကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတဲ့ Honor 7S နဲ့ Xiaomi Redmi6စမတ်ဖုန်း ၂ ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါမယ်။
အရင်ဆုံး ဒီဇိုင်းပိုင်းအရတော့ Honor 7S နဲ့ Redmi6ဖုန်းတွေ ၂ ခုစလုံးက အရွယ်အစားအရတူညီပြီးတော့ 5.45″ 18:9 Ratio Display တွေကိုပဲ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ Redmi6က Honor 7S ထက်ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Display အနေနဲ့ကတော့ ဖုန်း ၂ ခုစလုံးက 5.45″ အရွယ်အစားရှိတဲ့ HD+ Display ကိုပဲ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Screen-to-Body Ratio အနေနဲ့ကတော့ Honor 7S က 73.8% ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ Redmi6ကတော့ 72.7% ပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဒီနေရာမှာ Honor 7S က အနည်းငယ်ပိုသာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Processor ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Honor 7S က MediaTek ရဲ့ MT6739 Processor ကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ Redmi6ကလည်း MediaTek ရဲ့ Helio P22 Processor ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ RAM အနေနဲ့လည်း Honor 7S က 2GB ပဲ ပါတယ်ဆိုပေမယ့် Redmi6က 3GB ဒါမှမဟုတ် 4GB အထိ ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ Storage အနေနဲ့လည်း Honor 7S က 16GB ပဲ ပါဝင်ပြီး Redmi6မှာတော့ 32GB ဒါမှမဟုတ် 64GB ရွေးလို့ရမှာပါ။ ဖုန်း ၂ ခုစလုံးက MicroSD Card ထည့်လို့ရဦးမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာက Redmi6က ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။
Camera ပိုင်းမှာလည်း Redmi6က 12MP + 5MP Back Camera ပါဝင်ပေမယ့် Honor 7S ကတော့ 13MP Single Camera ပဲထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Back Camera အသုံးများတဲ့သူတွေကတော့ Redmi6က ပိုပြီး ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေဦးမှာပါ။
ဒါပေမယ့် Selfie Camera ပိုင်းမှာတော့ Redmi6ရော၊ Honor 7S ၂ ခုစလုံး 5MP Camera ပဲတပ်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Selfie ပိုင်းမှာတော့ တူတူပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
Battery ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Honor 7S က 3020mAh Battery ပါဝင်ပြီးတော့ Redmi6က 3000mAh Battery ပါဝင်မှာပါ။ အဲ့ဒီတော့ Battery ပိုင်းအရလည်း တူတူပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
နောက်ထပ် Redmi6ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုကတော့ Fingerprint ပါဝင်တာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် Face Unlock ပဲပါဝင်တဲ့ Honor 7S ထက် ပိုကောင်းနေဦးမှာပါ။
ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ကတော့ Redmi6က ဈေးအနည်းငယ်ပိုကြီးပြီးတော့ ငွေကျပ် ၁ သိန်းခွဲကနေ ၁ သိန်း ၈သောင်းဝန်းကျင်အထိရှိမှာပါ။ Honor 7S ကတော့ လက်ရှိမှာ ၁ သိန်း ၃ သောင်း ၉ ထောင်နဲ့ ရောင်းချနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Akhayar-Tech ပရိသတ်ကြီးဆိုရင်ရော ဘယ်ဖုန်းကို ရွေးချယ်မှာလဲ?
ဖုနျးတဈခုဝယျတော့မယျဆိုရငျ ငှကေပျြ ၁ သိနျးကြျောဝနျးကငျြက အနိမျ့ဆုံးသော ရှေးခယျြမှုတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ၁ သိနျးကြျောတနျ စမတျဖုနျးတှကေို ရှေးခယျြတော့မယျဆိုရငျ လကျရှိစြေးကှကျထဲမှာ ရှေးခယျြစရာဖွဈလာတဲ့ Honor 7S နဲ့ Xiaomi Redmi6စမတျဖုနျး ၂ ခုကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ပါမယျ။
အရငျဆုံး ဒီဇိုငျးပိုငျးအရတော့ Honor 7S နဲ့ Redmi6ဖုနျးတှေ ၂ ခုစလုံးက အရှယျအစားအရတူညီပွီးတော့ 5.45″ 18:9 Ratio Display တှကေိုပဲ အသုံးပွုထားတာဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျကွညျ့မယျဆိုရငျ ဒီဇိုငျးပိုငျးအရ Redmi6က Honor 7S ထကျပိုပွီး အဆငျပွတေယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
Display အနနေဲ့ကတော့ ဖုနျး ၂ ခုစလုံးက 5.45″ အရှယျအစားရှိတဲ့ HD+ Display ကိုပဲ အသုံးပွုထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Screen-to-Body Ratio အနနေဲ့ကတော့ Honor 7S က 73.8% ရှိမှာဖွဈပွီးတော့ Redmi6ကတော့ 72.7% ပဲရှိနတောဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ဒီနရောမှာ Honor 7S က အနညျးငယျပိုသာတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
Processor ပိုငျးအနနေဲ့ကတော့ Honor 7S က MediaTek ရဲ့ MT6739 Processor ကို အသုံးပွုထားပွီးတော့ Redmi6ကလညျး MediaTek ရဲ့ Helio P22 Processor ကိုအသုံးပွုထားတာဖွဈပါတယျ။ RAM အနနေဲ့လညျး Honor 7S က 2GB ပဲ ပါတယျဆိုပမေယျ့ Redmi6က 3GB ဒါမှမဟုတျ 4GB အထိ ရှေးခယျြနိုငျမှာပါ။ Storage အနနေဲ့လညျး Honor 7S က 16GB ပဲ ပါဝငျပွီး Redmi6မှာတော့ 32GB ဒါမှမဟုတျ 64GB ရှေးလို့ရမှာပါ။ ဖုနျး ၂ ခုစလုံးက MicroSD Card ထညျ့လို့ရဦးမှာပါ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဒီနရောမှာက Redmi6က ပိုကောငျးတယျဆိုတာ ငွငျးလို့မရပါဘူး။
Camera ပိုငျးမှာလညျး Redmi6က 12MP + 5MP Back Camera ပါဝငျပမေယျ့ Honor 7S ကတော့ 13MP Single Camera ပဲထညျ့သှငျးထားတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Back Camera အသုံးမြားတဲ့သူတှကေတော့ Redmi6က ပိုပွီး ရှေးခယျြစရာဖွဈနဦေးမှာပါ။
ဒါပမေယျ့ Selfie Camera ပိုငျးမှာတော့ Redmi6ရော၊ Honor 7S ၂ ခုစလုံး 5MP Camera ပဲတပျဆငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Selfie ပိုငျးမှာတော့ တူတူပဲလို့ပွောလို့ရပါတယျ။
Battery ပိုငျးအနနေဲ့ကတော့ Honor 7S က 3020mAh Battery ပါဝငျပွီးတော့ Redmi6က 3000mAh Battery ပါဝငျမှာပါ။ အဲ့ဒီတော့ Battery ပိုငျးအရလညျး တူတူပဲလို့ပွောလို့ရပါတယျ။
နောကျထပျ Redmi6ရဲ့ အားသာခကျြတဈခုကတော့ Fingerprint ပါဝငျတာပါ။ အဲ့ဒီအတှကျ Face Unlock ပဲပါဝငျတဲ့ Honor 7S ထကျ ပိုကောငျးနဦေးမှာပါ။
စြေးနှုနျးတှအေနနေဲ့ကတော့ Redmi6က စြေးအနညျးငယျပိုကွီးပွီးတော့ ငှကေပျြ ၁ သိနျးခှဲကနေ ၁ သိနျး ၈သောငျးဝနျးကငျြအထိရှိမှာပါ။ Honor 7S ကတော့ လကျရှိမှာ ၁ သိနျး ၃ သောငျး ၉ ထောငျနဲ့ ရောငျးခနြတေယျလို့ သိရပါတယျ။
Akhayar-Tech ပရိသတျကွီးဆိုရငျရော ဘယျဖုနျးကို ရှေးခယျြမှာလဲ?
by 2B .4mins ago